Filimka Solo: A Star Wars Story oo meel saarayo filimada Deadpool 2 iyo Avengers – Filimside.net
Shirkada Disney filimkeeda Solo: A Star Wars Story ayaa USA Boxoffice qabsaday laga bilaabo khamiistii keenay $14.10M wuxuuna ka faa’iideestay fasaxa Memorial Day loo yaqaan oo gudaha USA ka jiray.
Filimka Solo: A Star Wars Story waxaa la rajeynaa inuu keeno $108M qiyaas ahaan afarta maalmood ee ugu horeyso wuxuuna hogaanka USA Boxoffice kala wareegayaa filimada Deadpool 2 iyo Avengers: Infinity War oo masraxa awood ku heesteen.
Filimka Solo: A Star Wars Story sidoo kale suuqyada caalamka 43-suuq oo laga daawaday wuxuu ka keenay$11.40M balse ganacsigiisa wuxuu siweyn u karaar qaadan doonaa maal maha nagu soo fool leh madaama la saaray dalka muhiimka ah Mexico, China, Spain, India, Poland, South Africa, Turkey iyo Vietnam.
Dhinaca kale Deadpool 2 waxaa la rajeynaa inuu kaalinta labaad u dhaco USA Boxoffice sidoo kalena uu keeno $53.5 M todobaadkiisa labaad sedexda maalmood ee ugu horeyso taasina ay ka caawiso mudo 11-maalmood ah inuu USA Boxoffice kasoo xareeyo $230 million.
Ugu dambeyntii Avengers: Infinity War oo haatan ganacsigiisa gudaha Mareekanka $600M ka talaabay ayaa la rajeynaa in $625M ganacsigiisa gaaro marka uu dhameesto todobaadkiisa shanaad sedexda maalmood ee ugu horeyso taasi oo muujineyso mashruucaan weli inuu USA Boxoffice ka gadmaayo.
Waxaa Aqrisay 511